‘काल घिनाएका अाङकाजी’ « Postpati – News For All
‘काल घिनाएका अाङकाजी’
जीवन डाँगी । स्वर्ग छ या छैन ‘राम्रो मान्छेलेलाई स्वर्गमा पनि छिटै लैजान्छ’ भन्ने नेपाली उखान छ । तर केही मनुष्यका दृश्य देख्दा, यस्तो लाग्छ कि, उनीहरु देखि स्वर्ग पनि घिनाए छ ।
अाङकाजी नामक मनुवा नेपाली माटाेका घिनलाग्दा पात्र हुन् । उनले गर्ने हरेक नाैटंकीमा उदेकलाग्दो दृश्य बाहेक अरु केही देखिदैन । केहिदिन अघि राष्ट्रिय एकता दिवसलाई कालाे दिन मनाउदै गर्दा – केही थान अाङकाजीहरु खेरिएर पृथ्वीनारायण शाहकाे जन्मजयन्तीमा ढुङ्गालाई पृथ्वीनारायण बनाएर कृितिपुरमा थुके ।
बेला-बेलामा बाैलाउने अाङकाजी नाैलाे र अनाैठाे चित्र भने हाेईन । याे उनकाे जिबिका चलाउने शैली हाे !
भनिन्छ मानिस – चेतनशिल प्राणी हाे ! तर अाङकाजीमा मानिसमा हुनुपर्ने एक काैडी चेतना र समवेदनशीलता छैन । सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउनकै लागि गर्ने, उनका अमानवीय स्वभाव अचम्मित बनाउने किसिमका छन् ।
जात, धर्म, बर्गका नाममा समाज बिभाजन गर्ने र उशृखल गर्नेहरुलाई स्वर्ग घिनाएपनि, नर्क पठाउनै पर्छ । थाहा छ, उनीहरु नर्क जान मान्दैन तरपनि यस्ता राेगहरुलाई पठाउनै पर्ने बाध्यता जाग्दैछ समाजमा ।
अास्था, बिचार सबैमा हुन्छ र छ । कुन जात, कुन धर्म, कुन समाज, कुन समुदाय – कुन स्थानमा पर्याे र कसले पार्याे, त्याे फरक पाटाे हाेला । अाजकाे परिबेशमा यसकाे बैज्ञानिक तवरले समाधान गर्ने मनस्थिति बनिसकेको, समयमा – उग्रता : पागल-पना : किन देखाउने ।
अाफ्नाे पागल-पना, पागलखानामा देखाए भैगाे नि, कुनै समुदायको नाम भजाएर, बिदेशी पैसाेमा नाच्ने र अागनमा थुक्नेहरुलाई अपराधी भन्न ढुक्कले पाउनु पर्छ । स्वतन्त्रताकाे नाममा भाषा, धर्म, जातजाति खण्डित गर्नेहरुका नाच हेरेर बस्नेपनि राम्रा मनुष्य भने हाेईनन् ।
नेपाली धर्ती अाङकाजीहरुले बाेझ भैसक्याे । अाखिर कहिले सम्म नाङ्गो रुपमा हिड्ने अाङकाजीहरु, तिमिहरु नाङ्गै हिड्छाै, हामीलाई लाज लाग्छ ।
अविनले बनाएको कार्टुन देखेपछि उब्जिएका प्रश्न ।
लेखकका आफ्नै निजि बिचार हुन् ।